Goldogob: Caruur u dhintay cudurka daacuunka; qaar kale oo shuban-biyood ugu dhintay Garoowe. – Radio Daljir
Goldogob, June 14 – Laba caruur ah ayaa dhintay, qaar kalena waxa lagu dawaynayaa xarumaha caafimaadka kadib markii uu cudurka daacuunku ka dillaacay degmada Goldogob ee gobolka Mudug. Sidaa waxa Daljir u sheegay isu-duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka.
Saraakiil ka kala socda wasaaradda caafimaadka, hay’adaha Qaramada Midoobay iyo kuwa caalamiga ah ee ka howl-gala gobolka ayaa maanta (Talaado) gaaray degmada Goldogob sifo ay u soo hubiyaan xaaladda isla markaana ugu kuur-galaan heerka ay gaarsiisan tahay khatartu.
Shan ka mida caruurta uu soo ritay shubanka ayaa baaritaan lagu sameeyay waxa lagu ogaaday in laba ka mida ay qabaan cudurka dacuunka, halka mid kalena ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in looga shakisan yahay cudurka, laguna hayo baaritaan dheeraad ah. Laba ka mida caruurtaa ayaa iyagu la sheegay in ayan qabin cudurka.
Hay’adaha booqday degmada ayaa waxa ka mida kuwa Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka (WHO) iyo tan daryeelka dhallaanka (UNICEF).
Todobaadkii hore ayay wasaaradda caafimaadka ee Puntland waxa ay sheegtay in cudurka shuban-biyoodku uu ka dillaacay goobo ka mida Puntland, iyada oo ay dhakhaatiirta caafimaadka ee Isbitaalka Garoowe ay maanta shaaciyeen in shan caruur ahi ay maalmihii la soo dhaafay isla cudurkaa shuban-biyoodka u geeriyoodeen. Dhakhaatiirtu waxa ay intaa raaciyeen in tiro kale oo caruur ah haatan lagu daweeynayo isbitaalka.
Wasaaradda caafimaadku ma ayan sheegin in wax xiriir ah ay ka dhexeeyaan xaaladaha dacuunka ee ka jira Goldogob iyo cudurka shuban biyoodka ee ka jira Garoowe iyo meelo kale oo ka mida Puntland.